Namaoka lisitr’ireo mpandeha tamin'ny zotra MD 051 avy any Paris (Frantsa) tamin'ny 18 marsa 2020 ny fanjakana, ary miantso azy ireo hiantso maika ny laharana 914 na hanatona na Tobim-pahasalamana na ny Tobin'ny mpitandro filaminana akaiky azy indrindra : - Istasse Océane Eliane Marie Annie (Analamahitsy Carrière)- Halier Jean François (Toliara)- Cardon Luce (67ha)- Hanitra Raissa Funny (Ankaditoho Marohoho)- Tila Fabrice (Ankaditoho Marohoho)- Rasoarimalala Evelyne (Ampamarinana)- Noguer Jaine (Andaboly Toliara)- Benjanon Vainchtein (Matsabory Ambatoloaka)- Dumand Patrica Chantal (Madirakely Nosy Be).
Amperinasa manomboka androany marain’ity alatsinainy 23 marsa 2020 ity ny « Centre opérationnel Covid-19 », izay manana foibeny eny amin’ny MBC (Mining Busines Center) Ivato. Raha ny nambaran’ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle, sojaben’ny fakiolten’ny sampana fitsaboana Ankatso, sady mpitondraten’ity foibe mandrindra ny ady amin’ny Covid-19 ity, dia miisa 12 voamarina fa voan’ity valanaretina ity, ary misy 19 hafa ahiahiana eto Madagasikara. Miisa 1 253 ireo olona atoka-monina ary arahi-maso ara-pahasalamana ka ao Toamasina ny 70 amin’ireo. (Jereo Sary Tohiny)
Nanapa-kevitra ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo, fa mba hisorohana ny fiparitahan'ny valan'aretina coronavirus dia « Ajanona avokoa ireo tsena isan-kerinandro toy ny Mahamasina, Coum 67ha, Ambodin'isotry, Andravoahangy ary Ambohimanarina ». Hanao fanadiovana tsena faobe ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, iarahana amin'ireo mpivarotra sy ireo fikambanana. Hiaraka amin'izany ny BMH sy ny vondrona Mpamonjy Voina amin'ny fandrarahana fanafody.
Mitaraina ho tsy mbola nisitraka ny karamany hatramin’ny volana janoary 2020 ireo mpiasan’ny FOFIFA (Foibe FIkarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra), indrindra amin’izao trangan’aretina coronavirus izay atrehan’ny Malagasy rehetra izao. « Manana ankohonana velomina izahay, kanefa tsy mba afaka manangona ireo entana ilaina andavanandro toy ny mpiasam-panjakana toa anay noho ny tsy fisiam-bola », hoy ireto mpiasa ireto. Miahiahy, ireto farany, fa tsy ity valanaretina izay mila fehezina ny tsy hiparitahany ity ihany no mety hamoizan’izy ireo aina fa noho ny hanoanana amin'ny tsy fananam-bola noho ny karama tsy azo.
Nahitana filaharambe teny amin'ireo "Tsena Mora" nisokatra tamina Fokontany sasantsasany teto Antananarivo Renivohitra, mivarotra ireo entana ilain'ny mponina andavanandro, raha ny hita tamin'ity andron'ny alatsinainy 23 marsa 2020 ity. Tsy nisy voahaja ny elanelana sy ny fifampiarovana fa vao maika nitangorona ny olona. (Jereo Sary Tohiny)
Mikatona ny sampan-draharaha eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra manomboka ny alatsinainy 23 marsa 2020. Manaraka ny lamina araka ny fanambarana nataon'ny Filohan'ny Repoblika, Andry Rajoelina, isika, hoy ny Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina, ho fitsinjovana ny mpiara-belona amintsika manoloana ny fiparitahan’ny valanaretina coronavirus. "Mijanona any an-tranony avokoa ny olon-drehetra", hoy hatrany ny fanamafisana ataon’ny Ben’ny tanàna.
Covid-19: Zava-misy teto Antananarivo androany (Jereo Sary Tohiny)
Na ny tsena madinika épicerie, na ireo mpivaro-bary, na ireo mpivaro-kena, voakazo, ovy, karoty ary voatabia dia saika mikatona na tsy misy entana avokoa. Niakatra 8 000 ariary ny litatry ny menaka ho an'ireo mbola nanana. Ny voasary makirana kosa dia nidina 400ariary raha 1000 ariary izy nifandrombahana teo. Raha ny fanazavan'ireo mpivarotra dia noho ny tsy fisian'ny fiara mpitatitra, satria mandeha an-tongotra no maka ny entana amidy, nefa tsy misy fiara, taxi na taxibe hitondrana ny entana miverina amidy. Tsy araka ny hanofa 3cv na camion hitondrana entana miverina, rahateo nidangana avokoa ny vidin'entana eny amin'ny mpambongady. Tsy misy aloha hatreto ny tsena mora raha ny faritra maromaro nojerena alohan'ny atoandro amin'ny 12ora tsy maintsy hikatonan'ny tsena rehetra.